यी हुन्, चालक जसले ब्रेकफेल भएको बसलाई उकालोमा हालेर ४० जनाको ज्या’न” जोगाए ! - Seto News
सचिन परियारको घर गुल्मीमा पुग्दा बाउ छोराले थाले यस्तो काम, तेजेन्द्रले महिनाको लाखौ कमाउदै (हेर्नुहोस भिडियो)
“मेनुकाको मृ त्यु हैन ह त्या हो र ह त्यारा श्रीमान नै हो” भन्दै निकै आ क्रोशित हुँदै आए गाउँले (भिडियो हेर्नुस्)
एक युवतीले अर्कैको श्रीमान भगाए पछि गाउँ नै उर्लिएर भयो ल’फ’डा (भिडियो हेर्नुस) ।
प्रयोग भइसकेको क,ण्डम बटुलेर लाखौं कमाउने यी महिला, ब,यान सुन्दा प्रहरी नै च,कित !
Homeसमाचारयी हुन्, चालक जसले ब्रेकफेल भएको बसलाई उकालोमा हालेर ४० जनाको ज्या’न”...
यी हुन्, चालक जसले ब्रेकफेल भएको बसलाई उकालोमा हालेर ४० जनाको ज्या’न” जोगाए !
धनगडी – धनगढीबाट बाजुराका लागि छुटेको बस डडेल्धुरामा दु,र्घटना भएको छ। जिल्लाको अमरगढी नगपालिका -११ स्थित राइमा ना ७ ख १७४ नम्बरको बस ब्रेकफेल भएर दु,र्घटना । दु,र्घटनामा १६ जना घा,इते भएका छन्। उनीहरुलाई उपचारका लागि डडेल्धुरा अस्पताल लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ।
त,त्काल बुझ्दा ग,म्भीर यान्त्रिक गडबडिका कारण हुन पुगेकाे बस दु,र्घटनामा यात्रुकाे जीवन ब,चाउन सफल चालकले अपनाएकाे उपायका लागि धेरै धन्यबाद, घा,ईतेकाे अवस्थानुसार तत्काल उपचारका लागि सबैपक्षकाे उ,ध्दार र सहयाेगमा जुटाैं। दु,र्घटनाको थप विवरण आउन भने बाँकी छ।
यो पनि : धनगढी उप–महानगरपालिकाको वडा नम्बर ३ चटकपुरमा रहेको नेपाल आयल निगमको प्रादेशिक डिपो अगाडि ट्याङ्कर पार्किङ हुनु नौलो विषय होइन। विगत लामो समयदेखि उक्त क्षेत्रमा तीन दर्जन भन्दा बढी ट्याङकर दैनिक पार्किङ गरी राखिएका हुन्छन्। सोही ट्याङ्करको आडमा ६ लेन सडकमै अन्य गाडीहरु समेत पार्किङ हुँदै आएका छन्। लहरै हुने पार्किङले गर्दा ६ लेन सडकमा समेत जाम हुने गरेको छ।
आइतबार दिउँसो साढे एक बजे आयल निगमको डिपो भित्र ट्याङ्कर हाल्न खोज्दा १५ मिनेट भन्दा बढी जाम भएको थियो। आसपासमा अन्य सवारीसमेत पार्किङ गरिएका कारण उक्त क्षेत्रमा जाम भएको हो। अन्य स्थानमा समेत दैनिक जसो सवारी जाम हुँदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन रहेको चटकपुरका स्थानीय हरिप्रसाद भट्टले बताए। ‘यस्तो व्यस्त ६ लेन सडकलाई गाडी छुट्ने बसपार्क बनाइएको छ। अब बसपार्कको केही अर्थ नै भएन’ उनले भने।
धनगढी चौराह क्षेत्रमा जुन समयमा पुग्दा पनि एक दर्जन बढी ठूला सवारी साधन सहजै देख्न सकिन्छ। बसपार्कबाट विभिन्न ठाउँका लागि छुट्नु पर्ने गाडीहरु चौराहमा भेटिन्छन्। बस, विङ्गर, म्याजिक लगायतका गाडी सडकमै पार्किङ हुँदा आवातजावत गर्न मुस्किल भइरहेको छ। त्यसमाथि अव्यवस्थित रुपमा चल्ने अटोरिक्साका कारण दु,र्घटनाको जो,खिम पनि उत्तिकै छ।
खु:सीको खबर ! पत्ता लाग्यो सुजिता लाई यस्तो सम्म गरेको मुख खो लिन गो प्य कुरा आयो, तुरुन्तै हेर्नुहोस
setonews - 2021-07-10
विराटनगरमा प्रे,मिकाले प्रेमीलाई होटेलमा बोलाएर लि,ङ्ग का,टेपछि भिडियो सहित हेर्नुहोला ।
setonews - 2021-09-13
सबैले भाइरल बनाइ सकेर छो डिएका सचिन परियारको जीवन फेरि उस्तै,सबैले कमाउने भाँडो बनाएर छो डे कठै (भिडियो हेर्नुस्) ।
Setonews is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the industry.
धेरै हेरियको समाचार
रोचक जानकारी 2021-10-18
© Copyright 2019 and All Right Reserved setonews Design by Smart Info Tech